UYIFAKA NJANI I-APACHE MAVEN KWICENTOS 7 - IBHLOG
Uyifaka njani i-Apache Maven kwiCentOS 7
I-Apache Maven sisixhobo simahla kunye nolawulo lweprojekthi kunye nesixhobo sokuqonda esisetyenziselwa ikakhulu iiprojekthi zeJava. I-Maven isebenzisa iModeli yeNjongo yeProjekthi (i-POM), eyifayile yeXML equlathe ulwazi malunga neprojekthi, iinkcukacha zoqwalaselo, ukuxhomekeka kweprojekthi, njalo njalo.
Kule tutorial siza kukubonisa iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokufaka i-Apache Maven kwi-CentOS 7.
indlela yokubeka ii-divs ezimbini ecaleni kwenye
Indawo yokugcina esemthethweni yeCentOS iqulethe iipakeji zeMaven ezinokufakwa nomphathi wepakethe yum. Le yeyona ndlela ilula yokufaka iMaven kwiCentOS. Nangona kunjalo, ingxelo ebandakanyiweyo kwindawo yokugcina izinto isenokuba isale ngasemva kwinguqulelo yamva nje yeMaven.
#centos 7 #apache maven
Ngaba ungavota kratom
I-Apache Maven sisixhobo solawulo seprojekthi esimahla nesivulekileyo kunye nesixhobo sokuqonda esisetyenziselwa ikakhulu iiprojekthi zeJava. Kule tutorial siza kukubonisa iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokufaka i-Apache Maven kwi-CentOS 7.
Uqikelelo lwexabiso lemali ye-Eclipse
uyithenga phi imali yesats
ewe okanye hayi umvelisi ongacwangciswanga
Nick jr kusebenze roku